Sirta Qoyska Wanaagsan Qeebtii 2aad | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
War Illayn Talo Isuma Kaa Sheegto! |Tukesomalism.com
Jama Hursow — July 22, 2018
Aqristayaal waxaan horey oga sohadalnay waxyaaabaha keena guusha qoyska wanaagsan, amaba sirta qoyska wanaagsan. Waxyaabaha aan horey oga sohadalnay waxaa ka mid ahaa: in layareeyo hadalka kiisa aan wanagsaneen, runta iyo daacadnimada, baahida sariirta iyo isticmalka hadalka naxriista leh. Waxaa sidokale halkan idinkugu sogudbineynaa maanta qodobo kale oo aad muhiim ugu ah jiritaanka qoyska, islamarkaana dhameestiraya guusha qooyska wanaagsan. Waxaa ka mid ah:
– Guurka waa sir ee ilaasho. Waa maxey guurka waa sir macnaheeda ileen guurkani wuxuu ahaa mid lawada ogaa waqti badana soqaatay ugu danbeeentiina noqday guur lawada ogyahay, farxad iyo damaashaad badanna loosameyey. Micnaha aan ulajeeda waxey tahay nolasha goyskiina iyo waxyaabaha ka dhaca guriga waxey idintahay sir aan loobaahneen inay dhaafin ilbaabka guriga, sida inayna gaarin saaxiibadiina, qoyskiina iyo asxaabtiina waayo nolasha qoyskiina maquseyso dadka kale.
Tusaale arin ayaad kawada hadasheen ha ahaato mid mustaqbal, ama mid markas taagneed sida dhaqaalaha guriga iyo biilalka, ama khilaaf idin dhaxmaray. Waxaad ogataa waxyaabaha ugu ween oo bur-burka ukeena qoysaska inay tahay sirta qooyska oo gaarta qof sedaxaad. Iska ilaali waxyaabaha ninkaaga kuu sheegay ama xaaskaaga inaad lawadaagto qofkale, adigoo u arkaayo qofkasi inuu yahay saaxiib kuu dhow.
– Wada fariista oo ka wada hadla maalintiina siday ku dhamaatay. Arintani ma`a han mid ay bulshadeena u badantahay, se waa qodob aad muhiim u ah. Subixii ayaa lawada kacay, qofwalba wuxuu aaday nolol maalmeedkiisa caadiga ah sida shaqa, waxbarasha, ama qof ayaaba guriga ku haray. Waxaa lagayabaa sidokale caruur in lodirey dugsiga ama skuulka, Kadib waa lasoo wada noqday. Ogow nolasha kalabar waxaa lagu soqaatay banaanka, waa muhiim inaad wada fariisataan oo weydiiso lamaanahaagi wixii u qabsamay maalinta, ma wax caqabad ah ayuu lasokulmay. Haday jiraan waxyaaba dhibku ahaa nolashiisa maalintaas isku day inaad baabi`iso dhibtaas. Adigoo adeegsanaayo hadala naxriista leh islamarkaana u damqanaayo. Waxaase wax ka tustaa dhanka wanaagsan sida inuu cafiimad qaba taas ay tahay mahad Alle s.w.t u sognaatay ayna jiraan dad xanuunsan oo heysan fursad ay ku fikiraan. Tankale u sheeg aduunka inuusan aheen jano ay macquul tahay in waxwaba lagala kulmi karo adigana aad tahay garabkiisa. Tankale caruurta lafariista ee weydiiya dhanka skuulka waxay soo sameyen iyo wixii lososheegey idinkoo adeegsanaayo luuqada caruurta, taasi oo kuu sahleysa waxwalba inay kuu shegaan. F.G xiliga aad wada hadleysaan ma`ahan xili ladaalanyahay oo shaqada laga imaaday ee waa inay ahata xili jawi degan lagu jiro.
– Farxada iyo dhoola cadeynta. Farxad waxey wanaajisaa dareenka labada isqaba, waxey ku wada noladaan nolol wanaagsan oo leh dareen macno leh iyo qancin qoto dheer leh. Hadaba qoyska wanaagsan siduu ku helikaraa farxadaasi? Farxada waxaa lagu hilikaraa siyaabo kale duwan. Marka hore raali gelinta Alle s.w.t, iscaawinta shaqada guriga, nadaafada sida tan guriga, tan caruurta taadi iyo tiisi intaba. Inaad wax isku hadiyeysaan waxey kentaa sidokale Waayo xadiiska Rasuulka s.c.w ayaaba wuxuu ahaa “تهادوا تحابوا” micnaheedi tahay wax isku hadiyeeya waad isku jeclaaneysan. Marka waxaa hubaal ah markuu qof waxkusiya amaba kuu hadiyadeeya inay keeneysa farxad. Sidokale waa muhiim mararka qaar inaad banaanka aadiin oo aad waqti soqadataan kaduwan kan guriga.
Ugu dabeyntii barnaamijkeeni qoralka ahaa ee sirta qoyska waxan kuso gebagebeynayaa labo dardaaran ku socota labada isqaba midna gabdhaha midna wiilasha.
Marka hore gabadha. Gabar waxad ogataa inaad tahay tiirka dhaxe ee guriga in badanoo adiga wax wanaajisaa in badanoo guriga dhisnadaa, marka ku dadaal inaad marwalba dhanka wanaagsan wax kafiirisid. Tankale wiilasha waxaa ogaatiin Alle inuu idinsiyey awood taasoo ah masuuliyada reerka. Waxaad awodiin reerka inaad kala dirtaan mise isku heysaan ha`uisticmaalina awoodaas siqaldan. Waxadna ogaatiin marwalba furiinka inuusan ahayn xalka kowaad misene kan labaad ee kudadaal reerka inuu dhisnaado dulqaad badan ulahow xaaskaga, caruurtada iyo nolasha qoyskaga, waayo Alle ayaa masuul kaaga dhigay, hadayicin masuuliyadaasi.
Tags: Sirta Qoyska Wanaagsan Qeebtii 2-aad
Next post Maxay Af-Urur Muhiim u Tahay?
Previous post Waa Maxay Findoob?